Inkinga yendabuko yile:
1. Umshini wokufaka umbhalo ongakaze ugcinwe: isaladi sesitimela esenziwe ngomshini sakhiwe kabi, ijubane lomshini lihamba kancane, umphumela womsebenzi awulungile, impilo yomshini ayimpofu, izembe le-Z linamathele, iphutha le-diagonal likhulu, futhi i-angle yokukhetha ayiyinhle! Idrayivu ayinephutha futhi iphutha elilandelayo likhulu kakhulu! Ukulimala kabusha, ukwehluleka kwemishini njengokuqhuma kweslider!
2. Ukufaka umshini ngamafutha angalungile: sebenzisa igrisi, uwoyela, uwoyela womshini wokuthunga namanye amafutha. Ukubonakala kwe-Butter kuphezulu kakhulu, okungekho inzuzo kumshini. Ukubonwa komshini wokuthunga kuncane kakhulu, futhi kuyalimaza i-astringent. Okuvame kakhulu ukusetshenziswa kwamafutha enjini, okuzokhiqiza ukungcola kanye ne-adsorb.
3. Ukusetshenziswa isikhathi eside kwamafutha enjini. Kuzoba nesendlalelo sombala ophuzi ngaphezulu kwesitimela. Uzobona ukuthi izikhathi zokufaka umshini ziya ngokuya ziba mfushane, kanti nesidingo siya ngokuya sikhula.
Isixazululo, sebenzisa uwoyela okhethekile wokuthambisa oqukethe ubuchwepheshe be-graphene
1. Dissolve oil sludge Ngokuqinile futhi chaza ngokushesha isludge ekhiqizwa ngamafutha afana ne-motor uwoyela ibhotela
2. Ukugcwala okusebenzayo Kusetshenziswe kahle imigwaqo yokuqondisa, islayidi, izindonga zesikulufa, umama we-wire, i-rack, shaft yegiya, amabhere nezinye izinto zomshini wokuqopha
3. Ukuvikelwa okuthe xaxa Ubuchwepheshe obukhipha kancane obuyivikela buvikela ngempumelelo insimbi yensimbi futhi buqhakaza impilo yenkonzo 4. Kuphephile Inani le-PH alithathi hlangothi futhi alinazo izakhi ze-acid noma i-alkali, alisihleli isitimela esiqondisayo, futhi alinangozi emzimbeni womuntu!
1. Ngomshini omusha osetshenziselwe okokuqala: engeza ngokuqondile uwoyela okhethekile wokuthambisa ebhodweni lamafutha, ukuze ungeqi kokuthathu kwesilinganiso somthamo webhodwe likawoyela, ukugwema ukucindezela ngokweqile kanye nokuchichima. Noma sebenzisa ikani lokunisela noma ukuxubha masonto onke ukufaka ngokulinganayo ezingxenyeni zemishini. Kanye ngesonto noma isigamu senyanga.
2. Kwamathuluzi amadala, kunconywa ukuhlanza izingxenye ngaphambi kokuzisebenzisa!
Isikhathi sokuthumela: Apr-24-2020